Sida loo dhaqaaq Photo Album inay ku iPhone
> Resource > iPhone > Easy Jidka la doonayo in Photo Album inay ku iPhone
Su'aal: ? Waxaan u guuri karaa sawirka si album on iPhone ..? "Waxaan daraasiin sawiro qiimo on my iPhone oo dhan oo iyaga ka mid yihiin walax galka ah waxaan iyaga u guuri karaa siday u kala horreeyaan albums sawir oo kala duwan Ma jiraa thread wax uun wixii aan? .Waxa la isticmaalayo iPhone 4, ordaya ee macruufka 6. Fadlan ii caawiyaan. Thanks! "
Jawaab: Isticmaal desktop iPhone app inuu u dhaqaaqo photos iPhone in albums
Dabcan, aad si album dhaqaaqi karaan sawir ku iPhone. Si kastaba ha ahaatee, halkii ay ka abuuraya albums sawir-dhaqaaqa iyo sawir iyaga gacanta ku yar-screen iPhone, waxaad isku daydaa inaad qalab desktop ah inuu u dhaqaaqo photos iPhone in albums. Waxaad isku dayi kartaa TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) . Waa app aad u fiican in aad qabatid shaqada aad u.
Download Wondershare maxkamad version TunesGo inuu u dhaqaaqo sawir si album hadda!
Tallaabo-tallaabo hage inuu u dhaqaaqo photos in albums on iPhone
Tallaabada 1. Connect iPhone la computer
Isticmaal cable USB iPhone in ay ku xidhmaan iPhone la computer iyo abuurtaan TunesGo. TunesGo aqoonsan doonaa iPhone.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan la isticmaalayo TunesGo, fadlan hubso in Lugood on your computer la geliyo sameeyo. Haddii aan, fadlan ku soo dajiyo, maxaa yeelay, kaliya ka dib markii Lugood ayaa lagu rakibay, TunesGo shaqeyn doonaa si sax ah.
Tallaabada 2. photos loo baahan yahay galay fayl kala duwan
Laga bilaabo bidix ee suuqa kala TunesGo, waxaad ka arki kartaa Photos . Waxaa Click to Muujin fayl default sawir: Camera Roll & Photo Library . Ka dibna waxaad riixi kartaa Camra Roll oo Photo Library in ay doortaan photos loo baahan yahay oo guji "Dhoofinta" iyaga badbaadiya on your computer. Haddii aad doonayso inaad u guurto iPhone kuwaas photos in albums sawir kala duwan laga dhoofiyey si fudud, waa in aad iyaga kala sooco qaybo kala duwan ku riday dhiganta fayl hore.
Tallaabada 3. photos guurto albums on iPhone
Hadda waxaad la dhaqaajin karin sawiro galay albums. Riix heestii sawir (haddii aad abuuray ayaan) on TunesGo. Guji "Add" in ay doortaan sawiro aad gelisay in folder u dhiganta oo iyaga ku biiro heestii. Haddii aad u baahan tahay si ay u abuuraan album cusub, xaq-riix suuqa kala Photos u muujiyo ikhtiyaarka "Add Qaasaali". Waxaa Riix oo magacaabay waxa aad rabto.
Download TunesGo maxkamad version inuu u dhaqaaqo photos in albums on iPhone hadda!